အစာအဆိပ်သင့် တဲ့အခါ ဘာတွေဆောင်လို့ဘာတွေရှောင်မလဲ.... - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း » ရှေးဦးသူနာပြုစုခြင်း » အစာအဆိပ်သင့် တဲ့အခါ ဘာတွေဆောင်လို့ဘာတွေရှောင်မလဲ….
အစာအဆိပ်သင့် တဲ့အခါ ဘာတွေဆောင်လို့ဘာတွေရှောင်မလဲ….
ဘာလို့မှန်းမသိဘူး။အော့အန်နေတယ်၊ ဝမ်းတွေလည်းသွားနေတယ်။ ကိုယ်လည်းနည်းနည်းနွေးချင်သလိုလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ဒါက အစာအဆိပ်သင့်နေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အစာအဆိပ်သင့် တာကရောဂါကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ပေမယ့် လူတော်တော်များများမှာဖြစ်နိုင်သလိုနောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်ကြီးတဲ့ရောဂါအခြေအနေတစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့်ဖြစ်လာရင်သေချာကုသဖို့လိုသလို သက်သာသွားပြီးရင်လည်းသေချာလေးဂရုစိုက်ဖို့လိုပါမယ်။
အစာအဆိပ်သင့်တဲ့အခါအော့အန်တာ၊ ဝမ်းသွားတာတွေကြောင့် ခန္ဓါကိုယ်ကတော်တော်လေးအားအင်ကုန်ခမ်းနေနိုင်ပါတယ်။ရေဓါတ်လည်းတော်တော်လေး ကုန်ဆုံးနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓါတ်တွေနဲ့ရေဓါတ်တွေကို အမြန်ဆုံးပြန်ဖြည့်နိုင်တာက အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။ ဒါကြောင့် နလန်ထူစမှာသေချာလေးဂရုစိုက်မိဖို့လိုပါမယ်။
နေကောင်းခါစ လူတစ်ယောက်အဖို့ အာဟာရပြည့်ဝအောင်စားသုံးဖို့က မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့အချက်တစ်ခုပါ။ ဒါ့ကြောင့် အစာအဆိပ်မိတာကနေပြန်ကောင်းလာချိန်မှာ အာဟာရပြည့်ဝအောင် စားသုံးပေးပါ။
အော့အန်တာ၊ ဝမ်းသွားတာတွေကြောင့်ရေဓါတ်တော်တော်လေးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခြေအနေမှာရေဓါတ်ဖြည့်ပေးဖို့က မဖြစ်မနေလိုအပ်မယ့်အချက်တစ်ခုပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ရေဓါတ်ကိုပြည့်ဝအောင်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့မမေ့ပါနဲ့။
ခန္ဓါကိုယ်က အားအင်ကုန်ခမ်းနေချိန်မှာ အကောင်းဆုံးကပြည့်ပြည့်ဝဝအနားယူခြင်းပါ။ ဒါကြောင့် သက်တောင့်သက်သာနဲ့ပြည့်ပြည့်ဝဝအနားယူပေးဖိုပပြောပါရစေ။
အစာအိမ် နဲ့ အူနံရံတွေက အစာအဆိပ်သင့်ထားတာကြောင့် ပင်ပန်းနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အစာမာမာတွေမစားပါနဲ့ အစာခပ်ပျော့ပျော့လေးပဲ စားပေးပါ။
ချင်း (ဂျင်း) လက်ဖက်ရည်သောက်ပေးပါ
ဒါကလည် အစာအဆိပ်သင့်ရာကနေ နလန်ထလာသူအတွက်တော်တော်လေး အထောက်အကူပြုပေးနိုင်တဲ့ အိမ်တွင်းကုထုံးတစ်ရပ်ပါ။ ဒါ့ကြောင့် ချင်း (ဂျင်း)ရေနွေးကြမ်း တစ်ခွက်လောက်သောက်သုံးပေးပါ။
မြေပဲထောပတ်။ စတာတွေ စားပေးလို့ရပါတယ်။
အစာအဆိပ်သင့်မှုကြောင့် အစာအိမ် နဲ့ အူနံရံတွေကရောင်နေတာတွေဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမှာရောင်ရမ်းနေတဲ့ အစာအိမ် နပြ အူနံရံတွေကို ထပ်မံထိခိုက်တာမျိုး မဖြစ်စေဖို့အတွက် ဒါတွေကို မစားသင့်သေးပါဘူး။
ဘီယာ နဲ့ အရက် စတာတွေကို မစားသင့်သေးပါဘူး။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇန်နဝါရီ 1, 2020 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇန်နဝါရီ 21, 2020
What is best to eat after food poisoning?https://www.medicalnewstoday.com/articles/324021.php Accessed Date 28 August 2019
What to Eat After Food Poisoninghttps://www.healthline.com/health/food-nutrition/what-to-eat-after-food-poisoningAccessed Date 28 August 2019